Mid ka mid ah qaababka ugu wanaagsan ee Apple waxay bixisaa iPhone waa ay camera (horumarinta 2 Megapixel ilaa 8 Megapixel la duubo HD ilaa hadda). Intaa waxaa dheer in ay iPhone ee camera default, waxaa jira kumanaan barnaamijyadooda camera on App Store in ay bixiyaan saamaynta sawir oo kala duwan si kor loogu qaado tayada sawirka. Qaar ka mid ah caawimaad si ay u wadaagaan tiirarkii internet-ka ama qalab kale. Waxaa jira qaar ka mid ah barnaamijyadooda sawir laga heli karaa caawin kara in aad sawirrada ka fiican qaado. Marka ay jiraan boqolaal barnaamijyadooda sawir ku dukaanka, si sidee aad go'aansato kan ugu wanaagsan idiin sameeyo? Maskaxda ku hay qodobbada soo socda:
a) Features: Lugood waxay bixisaa noocyo kala duwan oo fara badan oo Chine sawir si kor loogu qaado, share iyo abaabulo sawirada. Dooro mid ka mid ah oo bixiya adeegga aad rabto in aad isticmaasho.
b) interface: Raadi Chine waa in si sahlan loo isticmaali. Codsiga waa in ay bixiyaan fududahay in la fahmo menu, Casharrada iyo cad xarunta caawimaad.
c) Graphics: Dhamaan muuqaallo kale ee ku jira codsigan ee user Ujeedada waa in la soo bandhigo cad oo sahlan in la fahmo hab. Qoraalka waa in si sahlan loo akhrin oo sanamyadiinna qorraxdana waa in si fiican loo soo bandhigo.
d) Stability: Raadi Chine in ay yihiin kuwo xasilloon on qalab aad. Codsiga keenaya telefoonka aad u sudhaan ma wanaagsana. Hubi bixiyaha ayaa la xariirta app ka ay sii daayo hore.
Hadda, bal aynu eegno ugu sareysa 10-ada sawir wanaagsan ee iPhone in waxa laga heli karaa dukaanka app.
Waa sahlan tahay si loo soo dajiyo iyo u isticmaal tafatirka sawir. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad in la isu geeyo labada sawirada mid ka galay. Feature ugu fiican tahay awooddiisa ah inuu abuuro photos laba-shka la isticmaalayo qalab doorashada caqli Adobe ee. Waxaad kor u qaadi kara gaadhista, ka duwan, Hufnaan iyo saturation. App ayaa sidoo kale Magic Bir Tool oo kor sawirkaaga si toos ah waa hadii aad si dhaqso laakiin natiijooyinka ugu fiican oo aad ka heli by qabsado kasta dejinta si gaar ah.
Waa app ah badan loo heli karo iDevices. Waxaad ka daabacan kartaa sawiro ka phone, albums Facebook iyo Instagram iyo soo qaado marka aad Walgreens deegaanka. Waxa kale oo aad xaalkaa photos karaa adiga oo isticmaalaya filtarrada iyo noocyo kala duwan oo qalab tafatirka. Sidoo kale abuuri kaararka sawirka qofka ka telefoonka kala duwan marto xilliyeed iyo qoraalka. Waxa ugu fiican ee ku saabsan app waa in aad daabacan kartaa oo qaado ka dukaan dhow Walgreen.
Iyadoo app waxa aad isku dari kartaa sawiro, video clips, oo aad codkiisa iyo melo si ay u abuuraan videos caadadii. U sheeg sheeko, sharax fikrad, ama idinku soo diro farriin shakhsi. Waxaa sidoo kale waxa uu dhisay-in web raadinta si aad u baadhid images leh filtarrada amaan raadinaya in ay sii waxyaalaha aan habboonayn ka muujinaya ilaa natiijooyinka raadinta. Waxa kale oo aad la wadaagi kartaa masterpiece SMS, Facebook, YouTube, Instagram ama geliyaan in WordPress.
Iyada oo taageero ka Muuse app ka Interactive Xusuusaha, waxaad samayn kartaa buugaag sawir cajiib ah ka telefoonka. Waxaa la iman fudud ah si ay u isticmaalaan iyo interface user badnayn. Dooro sawirada maktabadda, iyaga diyaarin sida aad jeceshahay oo iyaga la qorsheeyo oo la mawduucyada la siiyey. Si kastaba ha ahaatee naqshado, kuwaas oo ay yar yihiin. Markaas waxaad ka iibsan kartaa kitaabkan iyaga oo aad ka heli 7-inch buug hardbound square 20 bog oo jecel PIC aad.
Adobe keenay app kale oo isticmaala iPhone si kor loogu qaado tayada sawirka la iska taabto uun ah. Waxaad beddeli kartaa images la sifaatka aad u sareeya Photoshop sida marsiiyey, filtarrada qalab, doorashada iwm Waxa kale oo aad la qabsato karo midabada si kor loogu qaado tayada sawirka. Oo keliya ma aha, aad isku dari kartaa sawirada iyo wadaagaan masterpiece ah asxaabta iyo qoyska iyada oo Facebook iyo Twitter. Iyadoo Touch Photoshop, fursadaha hal abuur yihiin dhamaadka lahayn.
Soo diyaariyay Wondershare Software Co., Ltd app waxa uu leeyahay muuqaalada dheeri. Gan PIC la 8 hab camera laga heli karaa: Xabad Magic, Panorama, Janjeeri-Shift, Color qarashgareeyo, Xabad Touch, Anti-gariirid, oo walaacsan & Dhoola caddee Xabad. Waxaa la iman duubo HD. Aad Edit PIC ka aasaasi ah si ay u sifaatka aad u sareeya sida dalagga, gol leeyahay iyo FX codsanayso. Samee collage la heli karaa qaabab badan sida jir, dhejiya iwm iyo wadaagaan natiijada ku shabakadaha bulshada caanka ah sida Facebook, Twitter, iyo Instagram iwm
Waxay leedahay in ka badan 200 milyan oo dadka isticmaala. Waxaad astaysto sawiro iyo videos aad la saamaynta filter caadadii dhisay dhowr ah sida XPro-II, Earlybird, Kac, Amaro iwm Waxaa kale oo la stablilzation filimada in ay qaataan breathtaking videos. An aad isla wadaagi karnaa natiijada on Facebook, Twitter, Tumblr. Waxa ugu fiican waa ma jirto wax xad ah oo ku saabsan tirada files aad geliyaan. Sidoo kale ula falgalaan saaxiibadaa iyada oo la siinayo & helo ciyaartoyda iyo comments.
Iyada oo taageero ka app this, waxaad samayn kartaa filim fiirin isku mid ah iyo dareento mid ka mid ah lagu abuuray ee filimka app la magacaabay ka dib markii. Waxaad qabsan karaa videos la 70s filtarrada Retro. Waxaa jira kulan laga heli karaa in aad leedahay si aad u ciyaaro si uu u furo shaqeynta buuxda ee app. Waxa kale oo uu leeyahay feature tafatirka taas oo lagu daray weyn ah. Mid ka mid ah waxa ay borojektar feature ugu fiican. Kaddib markii aad dhameysid ka shaqeeya footage xumu, waxaad daawan kartaa natiijada shaashad borojektar metelay. Waxa kale oo aad email u diri kartaa wax soo saarka ugu danbeeya ama badbaadin in aad telefoon.
Soo diyaariyay Adobe, aad edit karaa sawiro si degdeg ah oo si fudud. Waxaad u xoojin karto tayada sawirka la hagaajin bar slide ama haddii aad si dhaqso codsan si toos ah arin ka mid ah taabashada. Laga soo bilaabo tafatirka aasaasiga ah sida dalagga, isku shaandheyn, ka saarida isha casaan si loo horumariyo sida gaadhista, miisaamid cad iyo ka saarista iin lahayn oo dhan muuqaalada waxaa laga heli karaa app bilaash ah. Waxay leedahay engine ah haya'ad image cusub si loo hagaajiyo wax-qabadka iyo in ay la tacaalaan files waaweyn. Sharing sidoo kale waa la heli karaa si Facebook, Twitter iyo via fariin.
Qaybtii ugu horreeysay ee app this la sii daayay sanadkii 2009 sameeysa ayaa waxaa updated mar kale iyo mar kale ilaa version ugu dambeeyay ee ahaa in la sii daayo 2012-qaad videos iyo sawiro la A.villa 6X zoom digital u shot cad oo isu geeyo natiijada la anti-gariireen, waayo, fahmeysaa darbo Asakrtii. Waxay leedahay ikhtiyaar saacad lagu heli karo in lagu soo qabto photos group Mudaysan sidoo. Waxa aad habayn kartaa ka kooban sawir iyadoo la kaashanayo Hanuuniyaa camera. Waxaa jira in ka badan 20 sida diirada la heli karo si xaalkaa aad sawirka si aad u masterpiece a sameeyo. La wadaag photos on Facebook, Twitter, Picasa, YouTube ama aad xitaa iyaga soo diri kartaa.
Top 20 Shabakadaha Internetka iyo Apps in Download Cool Ringtones
> Resource > Apps > 10 Best Photo ayeey Apps u iPhone